I-Samsung Galaxy A8s: Ukucaciswa, amaxabiso kunye nokuKhutshwa | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Kwiveki ephelileyo umhla wakhe wokubonisa waqinisekiswa, kwaye ekugqibeleni namhlanje Ii-Samsung Galaxy A8s zazisiwe. Yifowuni yokuqala yohlobo lweKorea ukuba ikhamera idityaniswe kwiscreen. Ngale ndlela, inkampani ikhokela ngaphezulu kwezinye iimveliso ezinje ngeHuawei kunye neNhlonipho esele iqinisekisile ukubonakaliswa kwezixhobo zazo.
Kodwa umlinganiswa ophambili ngeli xesha ngumnxeba weSamsung. Inkampani yaseKorea sele ivelise ngokusesikweni le Galaxy A8s. Ifowuni apho inkampani ibanga ukuba ibuyela kukhuphiswano. Ukucaciswa okuhle, uyilo lwangoku kunye nolwakhiwo, ngaphandle kwamathandabuzo, yonke into inempumelelo.
Ngelixa ityhiliwe ngoku, kukho ezinye iinkcukacha zesixhobo esishiywe phezulu emoyeni. Kodwa ngolwazi esilufumene namhlanje, sifumana umbono ocacileyo wento sinokulindela kule Samsung Galaxy A8s. Ifowuni apho i-Samsung inethemba lokutshintsha ukulahleka kwayo kwi-2018.
1 Iinkcukacha zeGalaxy A8s
Iinkcukacha zeGalaxy A8s
Esi sixhobo ifikelela kwicandelo eliphakathi kuluhlu, eqhubeka nokukhula ngokukhawuleza kwintengiso yamanye amazwe. Ke i-Samsung ingena kweli candelo lentengiso kunye nefowuni enayo yonke into ukuba ibe yenye yezona zidumileyo kuyo. Yintoni esinokuyilindela kule Galaxy A8s ngokweenkcukacha? Oku kukucaciswa kwayo ngokupheleleyo:
Isikrini: 6,4-intshi Super AMOLED kunye 2340 x 1080 isisombululo pixel kunye 19,5: 9 ratio
Inkqubo: I-Qualcomm Snapdragon 710-core-2, ene-360 ​​x Kyro 2.2 kwi-6 GHz kunye ne-360 x Kyro 1.7 kwi-XNUMX GHz.
Ukugcinwa kwangaphakathi: I-128GB (iyandiswa ukuya kuthi ga kwi-512GB ngekhadi le-MicroSD)
Ikhamera esemva: I-24 MP + 10 MP + 5 MP eneeferches f / 1.7 + f / 2.4 + f / 2.2 ngokwahlukeneyo kunye neFlash Flash
Ikhamera yangaphambili: MP engama-24 ene-f / 2.0 ukuvula
Ukuxhuma: I-Bluetooth 5.0, 4G / LTE, i-SIM ezimbini, i-WiFi 802.11a / b / g / n / ac, i-3.5 mm jack, uhlobo lwe-c-isinxibelelanisi
Abanye: I-NFC kunye nenzwa yeminwe ngasemva
Inkqubo yokusebenzaI-Android 8.1 Oreo kunye ne-UI enye njengomaleko wokwenza ngokwezifiso
Ibhetri: 3.400 mah
Ubungakanani: X x 158.4 74.9 7.4 mm
Ubunzima: I-173 gram
I-Samsung Galaxy A8s ishiya inemvakalelo emnandi ngokweenkcukacha. Luluhlu oluphakathi kwinqanaba lokugqibela olupheleleyo. Ineprosesa elungileyo, injani iSnapdragon 710, Iflegi kweli candelo lentengiso. Iza ngokudityaniswa kokubini kwe-RAM, kodwa kuzo zombini i-128 GB yokugcinwa kwangaphakathi kugcinwa. Indawo ke ayizukuba yingxaki emnxebeni.
Ifowuni ibonakala ngakumbi kwicandelo lokufota. Kuba ngasemva sifumana ikhamera kathathu, ngokulandela amanyathelo Galaxy A7 eyayiyeyokuqala uphawu ukuba nekhamera kathathu. Ine-sensor ephambili ye-MP eyi-24, i-10 MP ye-optical telephoto zoom kunye nesenzi sesithathu kwimilinganiselo yobunzulu be-5 MP. Ke zonke iintlobo zemifanekiso zinokuthathwa kwiimeko ezahlukeneyo ngenxa yesixhobo. Ukongeza ekubeni nobukho bobukrelekrele bokufakelwa kuyo.
Ngaphandle kokuba nekhamera ephindwe kathathu ngasemva, yikhamera yangaphambili yale Galaxy A8s eyenza uninzi lwezimvo. Kuba iba ngumzekelo wokuqala we-Samsung, kunye nentengiso, ukuba nekhamera eyakhelwe kwiscreen. Ikhamera ye-24 MP, eyakhelwe kwikona ephezulu ngasekunene kwesikrini. Ndiyabulela koku, ukufunyanwa kwescreen / umphambili we-100%.
Njengoko sinokubona kwiifoto, Imibala eliqela ilindelwe kule Galaxy A8s. Imibala iqinisekisiwe ukuza kuthi ga ngoku iblue, grey kunye noluhlaza, nangona kungagunyaziswanga ukuba kukho imibala emininzi phakathi kuluhlu oluphakathi olukhoyo. Le mibala mithathu iqinisekisiwe ngoku e-China.
Akukho nto ithethwayo malunga nokwaziswa kwefowuni okwangoku. Isamsung ifune ukugxininisa ukuzibophelela kwayo njengenkampani yehlabathi, kodwa khange bayikhankanye imihla okanye iimarike eziza kuthengiswa ngefowuni. Ungabhalisela kwiwebhu ukufumana iindaba ngayo. Kodwa okwangoku akukho nto iyaziwayo. Ixabiso lale Galaxy A8 khange likhankanywe.
Ke ngoko, kuya kufuneka si-elinda iintsuku ezimbalwa de sibe sinolu lwazi. Akubonakali ngathi kuya kufuneka ulinde ixesha elide, ke siya kubahoya.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-Galaxy A8s: Isamsung yokuqala enekhamera yokubonisa